R&D - Chengdu Dacheng New Energy Techenology Co. Ltd
1. Develop & Design & Components ရွေးချယ်ခြင်း၊ DCNE သည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အားသွင်းသည့်ပလပ်ဖောင်းကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်ပြီး အားသွင်းစက်လုပ်ငန်းတွင် အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကို ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
2. အထက်တွင်ရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်ဂျင်နီယာ 67 ဦးသည် R&D အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး DCNE သည် အားသွင်းနည်းပညာ 52 ခုကျော် ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တရုတ်တွင် မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
3. အားသွင်းကိရိယာများအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် သီးခြားစမ်းသပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
1. တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး အလုံပိတ် ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းအားသွင်းကိရိယာကို ထုတ်လုပ်ပြီး စစ်ရေးနည်းပညာ အတွေ့အကြုံ အနှစ် 20 ကျော် ပိုင်ဆိုင်သည်။
2. 2019 နှစ်ကုန်အထိ အားသွင်းကိရိယာ 200,000+ ကျော် ရောင်းချခဲ့သည်။
3. အမျိုးအစား 100+ ကျော်အတွက် သင့်လျော်သည်။
※အားသွင်းကိရိယာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည် ခေတ်မီစီမံခန့်ခွဲမှုအကြံဉာဏ်များနှင့် ကြီးမားသောဒေတာထိန်းချုပ်မှုအရည်အသွေးမုဒ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်နည်းပညာနှင့် အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများကို လက်ခံကျင့်သုံးရန် အခိုင်အမာတောင်းဆိုထားသည်။ အဆင့်မြင့် အလိုအလျောက် စမ်းသပ်ကိရိယာ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့် အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများတွင် စက်ရုပ်လည်ပတ်မှု နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဝန်ထမ်းများ၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို လျော့ကျစေပြီး ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
※လက်ရှိတွင် ၎င်း၏ လစဉ်ထွက်ရှိမှုသည် အားသွင်းစနစ် ထုတ်ကုန် အစုံပေါင်း 10,000-20000 ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးသည် DCNE ၏အသက်တာဖြစ်ပြီး ခိုင်မာသောအရည်အသွေးအသိအမြင်နှင့် တင်းကျပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် သုံးစွဲသူများ၏ရေရှည်ယုံကြည်မှုကို ရရှိထားသည်။ "Quality Leadership" ၏ သဘောတရားနှင့် အခြေခံမူများသည် ကုန်ပစ္စည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပေးသွင်းသူများ၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ အရောင်းနှင့် ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု၏ လုပ်ငန်းကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို ဖြတ်၍ လည်ပတ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် DCNE သည် ကုမ္ပဏီတွင်းနှင့် ပြင်ပထုတ်ကုန်ဒေတာကို ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးတွင် တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့် ထုတ်ကုန်ဒေတာကို ကောင်းမွန်စွာ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး တစ်ဦးချင်းနှင့် ယူနစ်မှ တာဝန်ယူမှု မွေးဖွားလာပါသည်။